Dowlada oo mar kale si jees jeesa uga hadashay qaabka uu u dhacay Dilka Cali Jabal - Hablaha Media Network
Dowlada oo mar kale si jees jeesa uga hadashay qaabka uu u dhacay Dilka Cali Jabal
HMN:- Dowlada FS ayaa mar kale ka hadashay dilka Horjoogihii Shabaab ee Gobolka Banaadir Cali Maxamed Xuseen oo ku magac dheer Cali Jabal.
Dowladu waxa ay sheegtay in dilkaas uu dhacay xili munaasib ah isla markaana wiiqi doonto dhaqdhaqaaqa ay maleeshiyadu ku laba jibaareysay weerarada.
Waxa ay dowladu tilmaantay in dilka Cali Jabal aawgii ay Shabaab yareyn doonto falalka ay shacabka ku ugaarsanayaan.
Cali Jabal waxuu ka mid ahaa saraakiisha sare ee Shabaab, waxa ayna Kooxda uga danbeyn jirtay talooyinka dhammaan dhaqdhaqaaqyada Gobolka Banaadir.
Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ku faraxsan tahay in uu guul ku soo dhammaaday weerarkii lagu beegsanayey Cali Jabal, kaasi oo ka dhacay agagaarka Toorotoorow ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Qoraal kasoo baxay Xafiiska Wasiirka Warfaafinta ayaa lagu yiri ”Sababta ay Dowladu u xoojineyso dagaalka lagula jira kooxaha argagaxisada ayaa ah sidii loo wiiqi lahaa inay shacabka u soo maleegaan walxaha qarxa oo loo diido waqti ay ku nastaan”
Waxaa lagu daray ”Weerarada noocan ah waa kuwo sii soconaya, waxaana u habboon in kooxahaas ay is soo dhiibaan oo ay nabada qaataan, dilka Cali Jabal ayaa ku yimid wadashaqeyn iyo bartilmaameysi mudo lagu ugaarsanayey oo tuseysa kuwa isaga oo kale ah inaysan marnaba fakaneynin oo dariiqa kaliya ee u furan uu yahay inay Dowlada isu soo dhiibaan”
Geesta kale, waxa ay sheegtay inay kusoo xigi doonaan Horjoogayaal kale oo Shabaabka u qaabilsan magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku dhow dhow, kuwaa oo la sheegay inay qalqal amni ku hayaan dalka isla markaana Kooxda u leeyihiin miisaan.